Dhamaadka sanadka Google Pixel-kaaga ayaa keydin doona qoraalka wicitaanka | Androidsis
Google Pixel wuxuu keydin doonaa qoraalada wicitaanada laga jawaabo AI
Manuel Ramirez | | Aaladaha Android, Noticias
Ilaa dhawaanahan Google Pixel durba si otomaatig ah ayuu uga jawaab celiyaa qofka soo waca, inkasta oo qoraalka wixii la yiri aan la hayn. Maanta waxaan ognahay in dhamaadka sanadka dhamaan Google Pixels ay keydin doonaan qoraalka waxa soo wacay.
Taasi waa, dhammaan wicitaanadaas uu Caawiyaha Google si toos ah nooga jawaabo, ayaa mas'uul ka noqon doona u gudbintooda qoraalka si aan u aragno waxa ku jira oo aan hoos ugu keydinno haddii aan u baahanahay.
Dhamaadka sanadka, dhammaan Google Pixels waxay awoodi doonaan inay si otomaatig ah uga jawaabaan wicitaanada si qayb ka mid ah waxyaabaha loo qoro loona qoro waan badbaadin karnaa. Taasi waa, way na soo wacayaan, waxay soo qaadaan taleefanka Kaaliyaha Google, way ka jawaabaan wicitaanka oo waxay qoraan wixii wicitaanku ku yiri qoraalka.
Markaa waxaan go'aan ka gaari karnaa haddii aan dooneyno inaan ka jawaabno nafteena ama nafteena fiiri taariikhda wicitaanada oo dhan oo ay la socdaan qoraaladaada. Sidaas ayaanu ku ogaan karnaa ujeedka dhammaan kuwa na soo wacay maalintii oo dhan.
Kuwaas oo dhan wicitaanada dhab ahaan xayeysiinaya spam Waa gargaar dhab ah, maadaama si otomaatig ah, ugu mahadnaqeyso shaqada Call Call, dhammaan lambarrada taleefanada ee aadan garaneyn Pixel-kaaga waa laga jawaabi doonaa. Waxaad qaadan doontaa daqiiqado yar inta lagu jiro maalinta si aad u aqriso qoraalka mid kasta oo aad u go'aansato haddii aad rabto inaad ku soo celiso wicitaanka hadda adiga oo leh codkaaga.
Shaqadani waxay noqon doontaa la heli karo marka hore beta, si markaa loo geeyo. Waxaad ka heli kartaa beta-ka Google Play Store laga soo xigtayMarka, marka la heli karo, waxaad awoodi doontaa inaad kaqeybqaadato tan hore oo aad ku ururiso dhammaan qoraaladaas maalinlaha ah mobilkaaga.
Mid kale tiknoolajiyadaas cajiibka ah ee Google Pixel, sida qaabka "Night Sight", oo goor dhow iman doona dhammaan taleefannada Google.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Google Pixel wuxuu keydin doonaa qoraalada wicitaanada laga jawaabo AI
Dhibaatooyinka waxay ku sii socdaan Google ee Pixel 3: hadda, cayayaanku wuxuu joojiyaa kamaradda